Wasaarada Beeraha Puntland oo digniin kasoo saartay Roobab dabeelo wa wata - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Wasaarada Beeraha Puntland oo digniin kasoo saartay Roobab dabeelo wa wata
Wasaarada Beeraha Puntland oo digniin kasoo saartay Roobab dabeelo wa wata
Wasaaradda Arrimaha deegaanka Beeraha iyo Isbedelka Cimilada dowlad Goboleedka Puntland ayaa soo saartay Digniin Cusub oo ku socota dadka degan deegaanada Gobolada Bari iyo Sanaag, waxaana lagu wargeliyay roobab daadad wata oo halkaas ku wajahan.
Dadka deggan deegaanada ay dhulalkoodu hooseeyaan, meelaha biyo mareenka ah iyo Togaga ayaa loogu baaqay inay ka digtoonadaan daadadka ka dhalan kara roobabka.
Digniintan kasoo baxday Maamulka Puntland ayaa waxaa ay kusoo aadeysaa, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay roobab xoogan oo dabeylo wata ay ka da’een Gobolka Karkaar ee Puntland.
Hoos ka Akhriso Qoraalka Wasaaradda Beeraha Puntland kasoo baxay.
Previous article(Deg Deg) Ciidanka Booliiska Cadaado oo gacanta ku dhigay ninkii dilay Xamdi Maxamed Faarax
Next article(Daawo) Ciidan ka tirsan NISA oo ka gadooday mushaar la’aan